Ra’iisul wasaare Kheyre oo magacaabay maareeye ku-xigeenka koowaad ee dekadda Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo magacaabay maareeye ku-xigeenka koowaad ee dekadda Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa mareeye ku-xigeenka koowaad ee dekadda magaalada Muqdisho u magacaabay Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Banaadir.
Maareeye ku-xigeenka koowaad ee dekedda Muqdisho Maxamed Axmed Diiriye (Yabooh) oo kasoo jeeda beesha H/gidir ayaa la sheegayaa inay magacaabistiisa timid kadib markii ay muddooyinkii ugu dambeysay ay cabasho soo gudbinayeen beeshiisa.
Sida muuqata arrintaan ayaa sidoo kale qeyb ka ah ka hortagidda olole ay beesha H/gidir muddooyinkii ugu dambeysay uga soo horjeeday dowladda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dhawaan ayay aheyd markii Axmed Maxamed Washington loo magacaabay xilka maareeyaha cusub ee dekadda Muqdisho, iyadoona ay xusid mudan tahay in dekaddaasi ay haatan maamusho shirkad Turki ah oo lagu magacaabo Albayrak.
Shirkadaasi ayaa la wareegtay awoodda iyo maamulka dekedda Muqdisho, iyadoona madaxda soomaalida ah ee xilalka looga magacaabay dekeddaasi aysan wax awood ah halkaasi ku lahayn.